“Waxaan doonayaa in Man City ay na garaacdo, waxba igama galin xitaa haddii ay nooga adkaato 8-0” – Taageere Man United ah! – Gool FM
“Waxaan doonayaa in Man City ay na garaacdo, waxba igama galin xitaa haddii ay nooga adkaato 8-0” – Taageere Man United ah!
(Manchester) 24 Abriil 2019. Taageerayaasha kooxda Manchester United ayaa ku kala aragti duwanaaday cidda ay taageerayaan kulanka caawa ee Derby Manchester oo labada kooxood ee ka wada dhisan Magaalada Manchester isaga hor imaan doonaan kulan aad u adag.
Haddii kulankaasi ay Manchester United badiso waxaa rajo weyn yeelanaysa kooxda Liverpool oo qaadi karta Horyaalka Ingiriiska markoodii ugu horreeyay muddo 30 sanadood ah.
Laakiin taageere Manchester United ah ayaa talkSPORT u sheegay in uu jeclaan lahaa in caawa laga badiyo kooxdiisa Man United oo ay guushu raacdo kooxda Manchester City, xitaa haddii ay doonto ha ku badiso 8-0.
Waxa uu sheegay in uu sidaasi u yeelayo si Liverpool ay uga hor istaagaan inay qaaddo Horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Taageerahan oo lagu magacaabo Dibbsy oo 50 sanadood ka badan taageeraya Man United ayaa waxa uu yiri: “Xitaa haddii ay nagu garaacaan 8-0 ma kala jecli, haddii Liverpool ku guuleysato Horyaalka weligeen qayladeeda ka nasan mayno, waana wax aanan dooneyn in aan maqlo.”.
“Anigu waxaan ahay taageere Manchester United ah, balse waxaan ka xumahay in aan taagerayo Manchester City caawa.” sidaana waxaa yiri taageere kale oo Man United ah.
Safafka rasmiga ah kulanka Manchester Derby ee kooxaha Man United iyo Man City oo lagu dhawaaqay
Man City oo si toos ula wareegtay hogaanka horyaalka kaddib guul ay ka gareen United iyo Arsenal oo waji gabax kala kulantay Wolves +Sawiro